Discount EPS mbishi zvigadzirwa Kugadzira uye Fekitori | XiongHuye
EPS mbishi zvigadzirwa
EPS (Inokwanisika Poly Styrene) isingaremi, yakaoma, epurasitiki furo yekumisikidza zvinhu zvinogadzirwa kubva kune solid particles ye polystyrene. Kuwedzera kunowanikwa kubudikidza nemari shoma yepentane gasi yakanyungudutswa mupolystyrene base zvinhu panguva yekugadzira. Iyo gasi inowedzera pasi pechiito chekupisa, yakashandiswa sehutsi, kuti igadzire maseru akavharwa eEPS. Aya maseru anotora kanokwana ka40 vhoriyamu yepakutanga polystyrene bead. Iwo EPS marozari anobva aumbwa kuva mafomu akakodzera anoenderana nekushandisa kwavo. Zvigadzirwa zvakagadzirwa kubva kune furo polystyrene dzinenge dziripo kwese, semuenzaniso kurongedza zvinhu, kuputira, uye furo zvinwiwa makapu
EE giredhi EPS mbishi zvinhu:
E-standard giredhi zvinhu ndeye inowanzo shandiswa yakajairwa EPS, inokodzera otomatiki vharuvhu inoumba michina, emagetsi dhiraini yekuumba michina, uye yechinyakare kusimudza hydraulic michina. Icho chiyereso chinopupuma furo chiyero mbishi zvinhu, izvo zvinogona kupupirirwa fuma kuti uwane yakareruka density mafomu panguva. Kazhinji, zvinonyanya kukodzera zvigadzirwa zvine furo mwero we13 g / l kana zvimwe. Inoshandiswa zvakanyanya mupakeji yemagetsi, yekupisa yekuisa zvinhu, uye hove dzinoyangarara. , Dzemhizha, kushongedza, yakarasika furo castings, nezvimwe.
1. Kasira kupupa furo;
2. Chiyero chinopupuma furo (chiyero chakadzikira pane P zvinhu);
3. Low energy consumption and steam steam;
4.Pfupi yekurapa nguva uye kuumba kutenderera;
5. Chigadzirwa chine sinterability yakanaka;
6. Smooth pamusoro;
7. Iyo saizi yakagadzikana, simba rakakwirira, iko kushanda kune simba, uye chigadzirwa hachizi nyore kudzikira nekuremara.
Giredhi Type Kukura (mm) Inowedzerwa Rate (imwe nguva) Kushanda
E giredhi E-101 1.30-1.60 70-90 Electrical ceramic kurongedza, mabhokisi ehove, mabhokisi emichero, mabhokisi emiriwo, kuyangarara, mabasa emaoko, furo rakarasika, nezvimwewo.
Flame retardant giredhi EPS mbishi zvinhu:
F-murazvo unodzora giredhi wapasa iyo US chengetedzo yekuyedza murabhoritari (UL) chitupa, gwaro setifiketi nhamba iri E360952. F-murazvo retardant giredhi inofanirwa kudzivirira kusanganisa isiri-murazvo inodzora zvinhu mukugadzirisa maitiro, uye kutarisisa kwakakosha kunofanirwa kubhadharwa kusasanganisa yakajairwa EPS. Idzi nzira dzisina kufanira dzekugadzirisa dzinoderedza marimi anodzora mashandiro. Iyo inokodzera F-murazvo unokanganisa nyika zviyero ndeiyi: insulated yakaumbwa polystyrene furo (GB / T10801.1-2002); zvekuvakisa uye zvigadzirwa zvinopisa mashandiro ekuita (GB8624-2012). Kuti uwane iyo B2 murazvo unodzora mashandiro, imwe nguva yekuchembera inofanirwa kupihwa kune chakaumbwa chigadzirwa kubvumira iyo inosara inopupuma mumiriri kutiza kubva kune furo muviri. Nguva yekuchembera inonyanyotemerwa neyekupupuma yemumiriri yezvirimo, kuoneka kuwanda, saizi yechigadzirwa uye mamwe mamiriro Mune yakanyatsofefeterwa nyika, inotevera data yeempirical inokurudzirwa pamashizha zvigadzirwa.
20mm gobvu, ingangoita svondo rimwechete kukwegura nguva 20mm gobvu, angangoita mavhiki maviri kukwegura nguva
50mm gobvu, angangoita mavhiki maviri ekuchembera nguva 50mm gobvu, angangoita mavhiki matatu kuchembera nguva
1. Kunaka murazvo unokanganisa mashandiro;
2. Kutsanya pre-kubuda kumhanya;
3. Iyo mbishi zvinhu zvine yunifomu inoyera size uye iwo anopupuma marozha ane kunaka kwakanaka;
4. Wide inoshanda renji, inokodzera akasiyana otomatiki uye echinyorwa ndiro yekugadzira michina;
5. Iwo mabhii ane furo ane maseru akanaka uye akaenzana, uye kuoneka kwechigadzirwa kwakatsetseka uye kwakatsetseka;
6. Chigadzirwa chacho chine kumira kwakanaka kwekusimudzira, kunamatira kwakanaka, kuoma kwakanaka uye kwakasimba simba;
7. Iyo yakakurudzirwa imwe-nguva yekuwedzera huwandu ndeye 35-75 nguva;
8. Inokodzera B2 zviyero zvekuvaka zvakajairika.
F giredhi F-101 1.30-1.60 70-90 Zvivakwa zvekuvakisa, kudziya kwemafuta uye zvemagetsi zvedongo kurongedza
Pashure: Furo Kurema Kwekuwedzera
Zvadaro: ICF block